Apụghị Play MP4 on Nexus 7? Edozi
> Resource> tọghata> Ike Play MP4 on Nexus 7? Edozi
Ọ bụ ezie na ọ na-ekwu site ukara saịtị na Nexus 7 nwere ike igwu MP4 faịlụ, e nwere oge ụfọdụ ebe ị ka ga-ada na-egwu MP4 Nexus 7. Gịnị bụ ihe ọjọọ na ya? Ntak apụghị na Nexus 7-akpọ ihe na MP4 faịlụ? Ọ bụ eleghị anya n'ihi na ọ na-emegide video codec. Dị iche iche MP4 faịlụ nwere ike ịchekwa faịlụ dị iche iche na video codecs. Nexus 7 naanị akwado ụfọdụ nke dị iche iche video codecs dị. Ndị ọzọ ga-ekwe omume nwere ike ịbụ n'ihi na nke video parameters dị ka etiti ọnụego, bit ọnụego na mkpebi, nke na-anaghị akwado na Nexus 7. N'agbanyeghị nke incompatibilities, ị kwesịrị a video akakabarede mee ka gị na MP4 faịlụ Ofụri Esịt dakọtara na ngwaọrụ.
Tọghata MP4 ka Nexus 7 Ò Kwekọrọ n'Ozizi usoro maka Windows / Mac (El Capitan gụnyere)
• tọghata MP4 iche iche formats gụnyere MKV, AVI, MOV, wdg
• Kachasị presets maka iche iche na ngwaọrụ, dị ka Nexus 7, iPhone, iPad, HTC, Samsung, wdg
• hazie video site n'itinye dị iche iche mmetụta, ma ọ bụ trimming, n'usoro n'usoro, cropping, wdg
• Tinye metadata ka video ibudatara Internet, ọ bụla arụrụ n'ụlọ video, ma ọ bụ fim na TV show, wdg
• tọghata videos na 30 X kasị ọsọ.
Tọghata MP4 ka Nexus 7
Ị pụrụ nanị họrọ Nexus 7 dị ka gị mmepụta format na kachasị preset. The converted videos ga-kasị mma kwesịrị ekwesị n'ihi na egwu na-akpọ azụ na ngwaọrụ.
Ị nwere ike ewepụtụ, akuku, bugharia, ma ọ bụ ịgbanwe ihie ma ọ bụ saturation gị dị video. Ọbụna na ọ na-ahapụ gị tinye sobtaitel ma ọ bụ dị iche iche mmetụta gị video.
Tinye metadata ka Video
Ọ pụrụ ime ka gị niile videos dị ka ndị na zuo site iTunes site na-agbakwụnye metadata (nkọwa, ikwu, cover, director ma ọ bụ omee aha, wdg).
Kasị Nchigharị Speed
​​Ị nwere ike tọghata a nnukwu faịlụ na dị nnọọ a nkeji ole na ole na 30X kasị akakabarede ọsọ were were enweghị ihe ọ bụla nkwụsị.
Olee otú iji tọghata MP4 ka Nexus 7
Nzọụkwụ 1: Import MP4 a MP4 ka Nexus Ntụgharị.
Nke a MP4 ka Nexus 7 video Ntụgharị-akwado ndị na ikpuru-na-dobe atụmatụ. Ya mere, ị nwere ike họrọ ịdọrọ gị obodo MP4 faịlụ site na kọmputa gị nri n'elu interface ma ọ bụ pịa Add Files bọtịnụ. Ozugbo uploaded, ị ga-ahụ na kwukwara MP4 faịlụ neatly haziri na stacked elu.
2. Họrọ Nexus 7 dị ka mmepụta format
Otu n'ime ndị kasị uru na nke a software nwere bụ wuru na-kachasị preset maka Nexus 7. Ọ ga-azọpụta gị hassle na oge na-eme nnyocha banyere kasị mma formats ma ọ bụ video parameters maka Nexus 7.
Iji họrọ kachasị format, ị dị nnọọ mkpa pịa na mmepụta Format na mgbe ahụ gaa Ngwaọrụ> Ndị ọzọ Atiya ma họrọ Nexus 7.
3. tọghata MP4 ka Nexus 7
Ugbu a, ị dị nnọọ mkpa see tọghata bọtịnụ na ala-nri akuku nke a MP4 ka Nexus 7 Ntụgharị si interface. N'oge akakabarede, ị pụrụ ịhụ ọganihu mmanya na oge fọdụrụ. Mgbe ọ mere, dị nnọọ pịa Open nchekwa button aka ịchọta ndị mmepụta faịlụ. Ke akpatre, ị ga mkpa nyefee mmepụta faịlụ gị Nexus 7 site na eriri USB. Ị nwere ike ugbu-enwe media faịlụ gị Nexus 7 na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Video Tutorial: Olee otú Play MP4 on Nexus 7 na Video Converter Ultimate
Ajụjụ banyere igwu MP4 on Nexus 7
1. Ajụjụ: Gịnị multimedia format na-akwado site Nexus 7?
Azịza: Nwere a ngwa ngwa lee anya na akwado faịlụ formats bụrụ na ị nwere ihe ndị ọzọ media faịlụ na mkpa ka a tọghatara tupu akpọ azụ. I nwekwara ike na-agụ ihe na otú ị pụrụ isi na-ahọrọ nri video Ntụgharị maka onwe gị.
Video Files: MPEG-4, VP8, H.264, na H.264 AVC
Audio Files: AAC, FLAC, MP3, Midi, PCM, ife, Vorbis, AMR-WB, AMR-NB
2. Ajụjụ: Gịnị bụ ihe kasị mma maka Nexus 7?
Top 5 Free Online MP4 ka MOV Ntụgharị
Olee otú Tinye SRT ka MP4
Nexus 7 Ike Play WAV Files? Edozi.